Naya course » शिक्षण अस्पताल कोहलपुरको सर्जरी वार्ड सिल शिक्षण अस्पताल कोहलपुरको सर्जरी वार्ड सिल – Naya course
शिक्षण अस्पताल कोहलपुरको सर्जरी वार्ड सिल
कोहलपुर/ नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल कोहलपुरको सर्जरी वार्ड सिल गरिएको छ । आन्द्रामा समस्या भएपछि उपचारका लागि आएका एक बृद्धमा कोरोना पोजेटिभ पुष्टी भएपछि सर्जरिवार्ड सिल गरिएको हो ।
आन्द्रामा समस्या भएपछि उपचारका लागि आएका उनको सल्यक्रिया गनुपर्ने अवस्था रहेको चिकित्सको भनाई छ । १० दिन अघि अस्पतालमा आएर ईमरजेन्सीमा वार्ड बाट उपचार सुरु गरेका उनको प्रारम्भीक रुपमा ३० जना कर्मचारी र स्वाथ्यकर्मीसंग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आएको पाईएकाले उनिहरुलाई क्वारेन्टाईनमा राखिएको नेपालगंज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल कोहलपुर उप निर्देशक डा. दिनेश श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनले थप ट्रेसिङको काम भई रहेको बताए । प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आएका अन्य कर्मचारीलाई क्वारेन्टाईनमा राखिने उनले जानकारी दिए ।
सानोभेरी नगरपालिका १ पश्चिम रुकुमका ८१ ब्र्षिय बृद्ध २२ गते अस्पतलामा भर्ना भएको डा श्रोष्ठले जानकारी दिए । १० दिन अस्पताल बसेका उनको सम्पर्कमा ठुलो संख्यामा स्स्वाथ्यकर्मिहरु सम्पर्कमा आएको बताईएको छ ।
सक्रमित उनको १/२ दिन भित्र अपरेशनको गरिने डा. श्रेष्ठले जानकारी दिए । नेपाल सरकारले लेवल ३ हस्पिटल घोषणा गरेको नेपालगंज मेडिकलल कलेज शिक्षण अस्पताल कोहलपुरले केहि दिन पनि कोरोना सक्रमित १ जनाको आन्द्रको सफल सल्यक्रिया गरेको थियो । उनको स्वाथ्य अवस्था हाल समान्य रहेकेो अस्पताले जानकारएको छ ।